Somali News 09.10.21
Published September 11, 2021 at 5:46 PM CDT
Sheriff -ka Degmada Woodbury Chad Sheehan ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo waajibka tallaalka Madaxweyne Biden ee lagu dhawaaqay shalay. Xafiiska Sheriff County Woodbury waxaa ka shaqeeya 120 qof. Waajibaadka madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay hay'ad kasta oo goob shaqo oo leh in ka badan 100 shaqaale inay tahay in dhammaan shaqaalaha la tallaalo ama la sameeyo baaritaanka COVID ee toddobaadlaha ah.
Kiisaska Covid 19 iyo tallaalada ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo kordhaya Degmada Woodbury. Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa sheegay in usbuuca bilaabanaya Ogosto 30-keeda, ay Degmada Woodbury ka jireen 287 xaaladood oo cusub oo ah COVID-19.
Waxaa jiray 17 qof oo isbitaal ku yaal Siouxland sababtuna tahay covid 19 heerka tallaalkana waa 43.4 boqolkiiba.
Carruurta da'doodu tahay 17 iyo wixii ka yar ayaa boqolkiiba 29 ka ahaa kiisaska togan ee COVID-19 ee laga soo sheegay Iowa usbuucii la soo dhaafay waxayna weli yihiin kooxda ugu da'da weyn kiisaska togan.
Sidoo kale, boqolkiiba kiisaska togan ee Iowans 17 iyo kuwa ka yar ayaa si joogto ah u kordhayay bishii la soo dhaafay.
Garsoore federaal ah oo ku sugan Des Moines ayaa maanta dhageystay doodo dacwad ah oo looga golleeyahay in lagu hor istaago mamnuucidda Iowa ee waajibaadka maaskaro ee dugsiga.
Garsooruhu isla markiiba ma go'aansan inuu oggolaansho ka bixiyo kiiska iyo in kale.
Waa dacwadii labaad ee looga golleeyahay in lagu horjoogsado mamnuucista amarka gobolka. Dacwad tan la mid ah oo ka timid waalidka Golaha Bluffs ayaa hor tegey garsooraha Degmada Polk shalay
Somali News 09.09.21
Saraakiisha Waaxda Maaliyadda Mareykanka ayaa sheegaya maanta inay khadka internetka kula kulmi doonaan dadka deggan Degmada Woodbury Isniintii, si ay…